'Umdlalo weTrone' Ixesha le-8 Iithiyori: Uqikelelo lwethu lwePlani - Itv
Eyona Itv 'Umdlalo weZihlalo zobukhosi' Ithiyori Tracker: Ixesha lethu elilelona liXhalabileyo 8 Uqikelelo lwePloti
Vumela ukuqikelela okuxhaphakileyo kuqala.UHelen Sloane / HBO
Njengalo lonke ihlabathi, sinokuninzi esinokuthetha ngako Imidlalo yeethrone . Iintsomi ezigxunyekwe nzulu, izinto ezinomtsalane, iziprofeto ezahlukeneyo kunye nemigca yamabali antsonkothileyo zonke zidibanisa ukukhuthaza intelekelelo engenamda kunye nethiyori. Ngexesha lokugqibela lomboniso kuthi, ngoku lixesha lokuba yonke loo nto uyisebenzise kakuhle kwaye unikeze imephu yendlela yeziqendu ezimbalwa zokugqibela.
Apha, siqulunqe iithiyori ezinkulu kunye noqikelelo esiya kwiXesha le-8. Siza kucwangcisa ukugcina esi sithuba sihlaziyiwe kunye neempendulo ezintsha kunye neempendulo kwezi veki zizayo.
Inkqubo ye- Oko Yenza ingqondo Iingcamango
Esinye sezizathu zokuba uCersei ayithiye kakhulu iTyrion ezincwadini kungenxa yesiprofeto uMaggy iFrog awasinikwa esemncinci. Uthe ukufa kwakhe kuza kuza ezandleni zika xabiso , eyiValyrian ePhakamileyo yomntakwabo omncinci. Kodwa ngokuthetha ngobuchwephesha, uJaime-iwele lika-Cersei - naye ungubhuti omncinci, njengoko wazalwa emva kodadewabo. Ngelixa le ntwana ingakhankanywanga kumboniso, iyichithile ingxoxo engapheliyo phakathi kwabafundi iminyaka.
Isiphelo esinjalo siya kusebenza njenge ubulungisa besibongo unikwe ubudlelwane obunobungozi babalinganiswa, iimbali zobuqu kunye nee-arcs eziphambukayo. Amaxesha akutshanje abone iJaime ehlaziyiweyo, ngelixa uCersei enze inkohlakalo ezininzi ukugcina amandla akhe. Kuya kufaneleka ukuba i-Kingslayer ibulale omnye ukumkani ukuze kulungeke ubukumkani.
UArya usebenzisa ubuso bukaJaime ukubulala uCersei.
Emva koko, u-Arya ebecinga ngokufa kukaCersei ukusukela kwiXesha le-1-le ntombazana ifuna ukubulala imbi . Njengoko sibonile kwisiphelo seXesha lesi-7, uJaime usendleleni eya eMantla ukunceda abaphilayo ekulweni nabafileyo. Kodwa yintoni ezakwenziwa nguStarks ngaye xa sele inyani malunga nokuwa kuka-Bran kuthotho lwe-premiere ngokungathandabuzekiyo ivele?
Ukutyhilwa kunokukhokelela ku-Arya ukuba abulale uJaime, athathe ubuso bakhe kwaye ehle aye eKing's Landing ukuze agqibe uCersei. Ngenxa yokuhanjiswa gwenxa kweziprofeto zikaGeorge R.R. Martin, umntu unokuphikisa ukuba oku kuzalisekisa ithiyori ye-valonqar nayo.
UJon Snow kunye noDaenerys Targaryen bavelisa indlalifa.
Siyazi ukuba inyaniso yobudlelwane bukaJon noDany-ngumakazi wakhe-iya kuthi kubangela umdlalo weqonga phakathi kwezi zimbini. Kodwa inyani ihleli kukuba isivumelwano somtshato phakathi kwaba babini yeyona ndlela ilungileyo yokuqinisekisa uzinzo kwezopolitiko kulo lonke iWesteros ukuba banokuphumelela iTrone Trone.
Ixesha lesi-7 libandakanya izikhombisi ezininzi kakhulu kwisiprofeto sikaMirri Maz Duur sokuba uDany akasenakuba nabantwana kuba bonisi ukuba bangabonakalisi into ethile. Umsebenzisi weTumblr intombazana encinci uthathe umdla ngokukodwa koku:
Intloko yesithathu yenamba iya kuba ngumntwana kaJon noDaenerys. Yiyo ke indlela esiza kukhawuleza ngayo isibeleko sakhe. Ndithetha nje.
Kukufa kuphela okuhlawulela ubomi (okanye into enjalo). Ukufa kuka-Viserion kuya kuhlawula ubomi bomntwana wakhe omtsha…
Iintloko ezintathu zesiprofetho sedragoni zazibandakanyiwe kwimibono kaDany kwiNdlu yokuDinwa ezincwadini, nangona umboniso uveza uhlobo oluncitshisiweyo lwezi ziganeko. Nayiphi na inzala eveliswe nguJon noDany yayiya kuba yingoma yomkhenkce kunye nomlilo.
Fumana i-hyped .
Ukusukela kwixesha lokuqala lomboniso, abadali uDavid Benioff kunye no-D. U-Weiss ufefe isonka esenziwe kulo mbambano.
UGregor Intaba uClegane ngumzalwana omdala okhohlakeleyo kuSandor The Hound Clegane kunye nomntu owenzakalise ubuso bakhe. Uzibophelele kuzo zonke iintlobo zolwaphulo-mthetho olubi kuyo yonke inkqubo yokubonisa. USandor khange abe nazintloni malunga nokudelela kwakhe iBig Bro, ngakumbi njengoko eye waphalaza intuthumbo yangaphakathi eyamkhokelela ekubeni enze ezinye izinto ezimbi.
Aba babini kulindeleke ukuba batshixe amakrele (kwakhona) ngaxa lithile kwiziqendu ezithandathu zokugqibela njengomzekelo ophambili wenkonzo yabalandeli be-epic kunye nokumelwa kohambo lokuziphatha kukaSandor. Ukusukela esiphelweni seXesha lesi-7, iNtaba yeZombified ihlala eKing's Landing njengesilwanyana sasekhaya sikaCersei, ngelixa iHound iye yaya eMantla iye eWinterfell.
Kuya kubakho ithuba lokuqhekeza kumzalwana wakhe kwaye ajongane nezo demon, uxelele uRory McCann, odlala indawo kaSandor Ukuzonwabisa ngeveki kwinyanga ephelile.
UKumkani wasebusuku uhlasela uMbutho.
Ngelixa ndithetha no Ukuzonwabisa ngeveki , UKumkani wexesha lasebusuku uVladimir Furdik uthe isimilo sakhe sinenjongo afuna ukuyibulala kwisizini yokugqibela. Ngokwendalo, ukucinga kokuqala kukuba nguJon Snow onikwe ungquzulwano lwangaphambili phakathi kwezi zimbini. Kodwa ubuso obudala be-Icy babenamathuba aliqela okubulala indoda engazi nto kwaye engekenzi njalo.
Kuthekani ukuba uKumkani wasebusuku akakho emva koJon kwaphela? Umhleli kwakhona IintombiOfTheHarpy unengcamango eqinisekisayo.
Kukho intetho yencoko esisixelela ukuba i-Bran ibaluleke kakhulu. NjengoJojen Reed! Uxelela iGatsha, inye kuphela into ebalulekileyo, wena! Ke utsho ukuba uBan yeyona nto ibalulekileyo. Kukho noBhenjamin. Uxelela i-Bran ngenye indlela, uya kuyifumana indlela eya kwihlabathi labantu. Kwaye xa esenza, uya kuba ulapho umlindile. Kwakhona, khumbula xa i-NK ichukumise u-Bran emva koko igwababa elinamehlo amathathu lixelela i-Bran, uyakuchukumisa! Uyayazi apha! Uya kuza kuwe! I-NK iza kwiBan? Ndiyathetha ukuba isixelela yonke into ekufuneka siyazi apho. Ke ulandela uBran!
Isizathu esilula kukuba kungenxa yokuba i-Bran lilo ihlungulu elinamehlo amathathu. Kodwa kukho okungakumbi koku! Ukuba ubukhe wabukela udliwanondlebe kunye no-Issac Hempstead-wright (i-Bran) usixelela ukuba i-NK kunye nehlungulu elinamehlo amathathu ZIINTSHABA ZAMANDULO! Uye wathi izibane zangaphantsi komhlaba phambi kwale miqolomba inamehlo amathathu, zibekwe ngabom apho, ukunqanda nabani na oza emqolombeni ukuba abe ligwababa elitsha elinamehlo amathathu. Ke izibane ezibulale uJojen, zabekwa apho ukunqanda nabani na ongomnye ukuba abe lihlungulu elilandelayo. Ke i-NK ayifuni mntu wumbi ukuba abe ligwababa elinamehlo amathathu. Akafuni NANYE na amahlungulu anamehlo amathathu kwaphela! Ke i-NK kunye nehlungulu elinamehlo amathathu ziintshaba zakudala.
Hmm, ndimamele iingcinga
U-Bran wajika i-Mad King yaphambana.
Siye sabona iimeko ezininzi apho uBan ahlangane ngempumelelo kunye nexesha elidlulileyo ngexesha elinye lemibono yakhe ye-Raven-Eyed Raven. Ukucinga ukuba uBrother angazama ukusebenzisa oku ukuncokola notata kaDaenerys, uMad King Aerys Targaryen, kwixa elidlulileyo kwilinge lokuthintela zonke iingxaki zomboniso ngokupheleleyo.
Nangona kunjalo, kwathiwa u-Aerys Targaryen wakhula engazinzanga xa wayeqala ukuva amazwi entlokweni yakhe, ke ngaba ilizwi elalimgxotha yayileli-Bran Stark? Ngaba Imidlalo yeethrone Utyalomali oluninzi kwisiphelo salo kwindawo ekhohlisayo yentloko yomtya osisiphumo esivela kwindalo yokwexeshana? Ukuboleka kolunye uthotho lwe-HBO, ixesha sisangqa esithe tyaba.
UnOhBeeees : Ndicinga ukuba [uGeorge R. R. Martin] uhleli esidleleni ngokubiza uJaime 'Kingslayer' kwaye uyithathe njengegama elithandwayo. Ngalo lonke eli xesha, iGRRM isixelela ukuba uJaime uza kumbulala ukumkani. UJaime uyakuchaza ngempumelelo loo mbono 'weKinglayer' njengelona gama libalaseleyo njengoko eya kuba ngumsindisi wommandla. Yilelo bali liya kubhalwa encwadini eneenkcukacha zokuxhaphazwa kweKingardguard.
UJaime uxhotyiswe ngekrele laseValyrian, elinokubulala iWhite Walkers, kunye nempahla eyoneleyo yokuhambisa ibali lesikhuzo. Isenzo sinokuba sesokuzincama apho athengisa khona ngobomi bakhe ukusindisa ubukumkani, ngaloo ndlela ebhala ilifa lakhe lokuhlangula kwinkqubo. UJaime wenza, ngapha koko, wayecinga ngendawo yakhe kwimbali ngelixa wayejonga iKingsguard's Book of Brothers yamaxesha onyaka adlulileyo.
Ngoku lithuba lakho, uGolden Boy.
Ngxangxayi ucinga ukuba kukho enye into kumlingo weWhite Walker kunokuba sibonile:
Ekuphela kwendlela 'yokumoyisa' yile (kwaye le yayiyindlela enye enokwenzeka ukuba le yenzeke) umntu kufuneka 'akhuphe' i-dragonglass esifubeni sakhe eyayisetyenziselwa ukumdala kwasekuqaleni. Ngokwenza oku uKumkani wasebusuku wayeza 'kufa,' kodwa ngokungafaniyo nento eyenzekayo xa umntu ebulala umntu oqhelekileyo omhlophe ohambahambayo, akukho nasinye sezidalwa ukumkani wasebusuku 'awadala' okanye wajika oza kufa. Endaweni yoko baya kuphulukana nengqondo yokulawula ukusebenza kukaKumkani wasebusuku kubo kwaye baya kuqala ukwenza nantoni na abayifunayo, okt ukujikeleza ilizwe liphela.
Ukuthintela le meko ukuba ingenzeki umntu kufuneka athathe indawo kaKumkani wasebusuku ngokuzihlaba nge-dragonglass-dagger eyayikhutshiwe ngaphambili.
UJon lolona hlobo lweqhawe lomfanekiso omkhulu obotshelelwe ngumsebenzi onokuzincama ngoluhlobo ukusindisa ilizwe. Nangona kunjalo, ithiyori iyaqhubeka ithi ukuba nguKumkani wasebusuku kuya kuyonakalisa imilinganiselo yokuziphatha kwakhe njengoko ibisenza kulwaziso lwangaphambili. Xa oko kusenzeka, uya kukhwela ezantsi kwakhona kwaye afumane indawo entsha, kanye njengokuba uKumkani woBusuku enokwenza ngoku. Ngumjikelo ongapheliyo.
Ngokufana nokucinga kwethu kwasendle. Kungekudala!
I-Poll iqinisekisa uBernie Sanders ngoyenaPolitiki uthandwa kakhulu kweli lizwe
I-YouTube ngoku ibhala i-State-Run Media clip ukuba ilwe neendaba ezingeyonyani
I-5 yeeNdawo eziLungileyo zokuShwabana kunye neeSerum zokuGuga eziGugayo zango-2021
Injongo kukhenketho lwehlabathi ujustin bieber
Lily Tomlin Jane fonda bhanyabhanya
Olona hlobo lomsebenzi luluncedo ekwakheni izihlunu
Ungayidlula njani i-nytimes paywall